စားလို့ ရမ်းကောင်းတာပဲ အမ
်သွားပြီး သွားပြီး . . ထန်းသီးတွေရော . . အုန်းသီးတွေရော . . အုန်းရည်တွေရော . . . အင်းးး
စားပြီးလို့ကတော့ ခေါင်းကြော ထိုးတက်လိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်း . . အိပ်တောင်ငိုက်လာပြီးကွယ် . . .း))))))
စားချင်စရာလေးနော် အမမိုးငွေ့ .. :)
31 May 2013 at 22:44
အုန်းစိမ်းကျောက်ကျောစားချင်တယ်။ မွှေးနေတာဘဲဆိုတော့ သရေကျတယ်။
ထန်းသီးလဲ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒီမှာရှိဘူး။
အဲ... မိုးငွေ့က ဒါတွေလဲလုပ်တတ်တာပါလား မထင်ရဘူး မထင်ရဘူး ကျော့ကျော့လေးပဲ မြင်နေကျဆိုတော့ အံ့ရော... ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောင်လို့ရပြီ :)
ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်ကွယ်...တို့များက အလှမစားတတ်ဘဲ ကရင်တွေလို အ၀ပဲ နှိပ်တတ်တော့ ခက်သကိုး...စားတော့ စားချင်စရာလေးတွေချည်းပဲကလား ...